Fanendrena: Fandaharam-potoana an-tserasera an-tserasera ho an'ny orinasanao | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Zoma, Oktobra 23, 2020 Douglas Karr
Ireo orinasa manana tolotra miompana amin'ny serivisy dia tsy mitsahatra mitady fomba hanamorana ny mpanjifa mividy ny serivisiny na mitahiry ny fotoanany. Fitaovana fandaharam-potoana fanendrena toy ny Appointy dia fomba iray tsy manam-paharoa hanatratrarana an'io satria azonao atao ny manome fahafaha-miaina sy manovaova ny famandrihana an-tserasera 24 × 7 miaraka amin'ny tombony fanampiny amin'ny fandoavam-bola an-tserasera azo antoka, fampandrenesana famandrihana eo no ho eo, ary famandrihana indroa aotra.
Tsy izany ihany, fitaovana iray ao anaty iray toa fanendrena dia afaka manampy anao mitantana ny orinasanao amin'ny fomba mandaitra kokoa, manara-maso ny famokarana ataon'ny mpiasa ary mampitombo ny asanao amin'ny endrika marketing marina.
Manendry fandaharam-potoana amin'ny Internet: Topimaso ny vahaolana
fanendrena dia rindrambaiko fandaharam-potoana amin'ny fanendrena an-tserasera izay manome sehatra mora ampiasaina amin'ny famandrihana an-tserasera, miaraka amin'ny fampahatsiahivana mandeha ho azy, fanodinana fandoavam-bola, fampiharana finday ary maro hafa! Manampy anao amin'ny fitantanana sy fampiroboroboana ny orinasanao izany amin'ny alàlan'ny fahazoana mpanjifa vaovao sy fihazonana ireo efa misy.
Maherin'ny 200,000 XNUMX ireo tompona orinasa isan-karazany toy ny fampianarana, salon, spa, fahasalamana ary fanatanjahan-tena, serivisy matihanina, governemanta sy sehatra tsy miankina, birao fitsaboana, asa aman-draharaha sy ekipa sns ... mametraka ny fitokisany amin'i Appointy.
Manampy ny orinasanao amin'ireto tombony manaraka ireto ny Appointy:
Famandrihana 24 × 7 an-tserasera
Miaraka amin'ny Appointy, ny mpanjifanao dia afaka mandahatra fotoana miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, amin'ny fotoana mety aminy. Miasa toy ny mpandray olona 24 × 7 izy io, izay mitantana ny fandaharam-potoananao ary mamonjy anao amin'ny olan'ny famandrihana famandrihana tanana amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka. Afaka miditra amin'ny pejinao famandrihana araka izay ilainy ny mpanjifa. Ankoatr'izay, tsy mila miahiahy ianao momba ny fotoana tsy voatendry voatendry ivelan'ny orinasanao!
Ny mpanjifanao dia afaka mandahatra fotoana mora amin'ny fizotran'ny famandrihana. Rehefa takiana izy ireo dia afaka manafoana na mamerina mametra ny fotoana nanendrena azy ao anatin'ny segondra vitsy! Ny Appointy dia mamela anao hanamboatra ny pejinao famandrihana mba hifanaraka amin'ny sarinao.
Taranaka mitarika Multi-Channel
Ampitomboy ny fahitana an-tserasera ny orinasanao ary ho hita eo amin'izay misy ny mpanjifanao - Google, Facebook na Instagram! Ny fidirana amin'ny appointy dia manampy anao hampiasa ny herin'ny haino aman-jery sosialy hahafahanao mpanjifa bebe kokoa.
Miaraka amin'ny Appointy, azonao atao ny manampy bokotra 'Book Now' ao amin'ny Google MyBusiness, Facebook, ary ny tahiry Instagram hanovana ireo mpitsidika mombamomba anao ho mpanjifa mandoa. Ny bokotra boky izao dia handrisika ireo mpitsidika ny mombamomba azy handamina fotoana miaraka amin'ny orinasanao ao anatin'ny fampiharana.
Miaraka amin'ny Reserve anay miaraka amin'ny fampidirana Google, ny mpanjifanao dia afaka mahita sy mamandrika anao mivantana avy amin'ny Google Search, Maps ary tranokala RwG. Amin'ity fomba ity, ianao dia hamorona mpanjifa vaovao bebe kokoa nefa tsy mandoa dime!
Fiarovana tsy misy seho
Ny Appointy dia mamela anao handefa fampahatsiahivana amin'ny alàlan'ny mailaka sy SMS amin'ny mpanjifanao alohan'ny fotoana voatondro hampihenana ny tsy fampisehoana sy fanafoanana ny minitra farany. Ny mpanjifanao dia afaka mamerina mandamina mora foana raha tsy afaka manao izany na mampahafantatra mialoha izy ireo mba hahafahanao mameno ireo slot tsy misy na inona na inona ary tsy hahavery vola.
Ny Appointy dia mifangaro amin'ireo rindranasa fandoavam-bola malaza toa ny Paypal, Stripe, Square mba hanomezana safidy fandoavam-bola eo noho eo ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana anaovana famandrihana na fizahana.
Azonao atao ny misafidy ny hanaiky fandoavam-bola feno, ampahany, na tsy misy amin'ny Internet amin'ny fotoana anaovana famandrihana. Ny fandoavam-bola an-tserasera dia afaka manampy anao hisoroka ny famandrihana tsy ara-potoana ary manome fiarovana fanafoanana.
Ny fidiran'ny Appointy's Square POS dia mameno ny antsipiriany amin'ny fanendrena ary miantoka ny fizotry ny fizahana haingana sy malefaka ho an'ny mpanjifanao.
Kalandrie fandaminana fotoana ara-potoana
Ny kalandrie tena misy an'i Appointy dia ahafahanao mijery ny fandaharam-potoanan'ny andronao amin'ny indray mipy maso, miaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny mpiasa marobe amin'ny efijery tokana. Fantaro ny banga rehetra ary fenoy ny slot banga amin'ny fitantanana fotoana mahomby.
Azonao atao ny manova ny fahazoanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny kalandrie. Ankoatr'izay, mamela anao hamerina handamina mora foana ilay fisintomana sy ny fampidinana.
Ny Appointy dia manohana ny fampifandraisana roa miaraka amin'ny kalandrie malaza manokana na matihanina toa an'i Google Cal, iCal, Outlook, ary maro hafa hahafahanao mijanona eo ambonin'ny fandaharam-potoan'ny andronao foana.
Staff sy Client Management
Ny Appointy dia ahafahanao manome ny anton-diany fidirana manokana ho an'ny mpiasao, izay ahafahan'izy ireo mifehy ny fandaharam-potoany, ny fisian'izy ireo ary ny ravin'izy ireo. Manampy anao amin'ny fitantanana am-pahendrena ny mpiasao izany, amin'ny alàlan'ny fizarana fanendrena amin'ny loharano be mpampiasa / be mpampiasa indrindra, ary manatsara ny famokarana.
Ny Appointy's CRM dia mamela anao sy ny mpiasao hanome traikefa amin'ny mpanjifa manokana amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fitondran-tenany. Tehirizo ny antsipiriany manan-danja toy ny valin'ny forme fidirana, ny hetsika fanendrena, ny tantaran'ny fividianana, ny naoty ary maro hafa amin'ny toerana iray.
Azonao atao ihany koa ny manangona an-tsaina ireo mpanjifanao mifototra amin'ny toetra manan-danja toy ny hetsika, ny valiny ary ny tsy fivadihana hifantoka amin'ireo mpanjifa marina ary hampandeha tsara ny ezaka ataonao.
Amin'ny alàlan'ny fampiharana famandrihana Appointy dia azonao atao ny mitantana ny orinasanao manontolo amin'ny findainao. Tantano ny fandaharam-potoana, ny fandoavam-bola, ny kalandrie an'ny mpiasa, ny fanendrena ary maro hafa amin'ny alàlan'ny fampiharana rehefa mandeha.
Fakan-kevitra amin'ny Virtual
Ny fampidirana an'i Appointy miaraka amin'i Zoom dia ahafahanao mandahatra dinika amin'ny Internet, fivoriana lavitra, fihaonambe, kilasy virtoaly, na webinar. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manitatra ny tratran'ny orinasanao amin'ny faritra samihafa, manerantany.
Ny famandrihana tsirairay avy dia mamorona rohy fivoriana Zoom mandeha ho azy ary ny kilasy virtoaly na ny session dia ampidirina ho azy ao amin'ny kalandrie misy anao.
Ny antsipirian'ny fanendrena virtoaly dia aseho amin'ny pejy fanamafisana ny famandrihana ary alefa amin'ny alàlan'ny mailaka / fanamafisana an-tsoratra ary fampandrenesana fampahatsiahivana ho an'ny mpandray anjara rehetra. Mba hanatevin-daharana azy dia mila tsindrio tsotra fotsiny ny rohy Zoom ny mpanjifa ary halefa ny fampiharana azy ireo!
Analytics & Tatitra
Ny fanadihadihana sy ny tatitra ataon'ny Appointy dia manampy anao hanaraka ireo tondro fampisehoana lehibe toy ny isan'ny fanendrena, fahafaham-po amin'ny mpanjifa, varotra, fahombiazan'ny mpiasa ary bebe kokoa amin'ny fotoana tena izy. Mijanona eo an-tampon'ny zava-bitao hatrany ary mandraisa fanapahan-kevitra aroson'ny data hanatsarana ireo metatra fandraharahana ireo.
Manomboha amin'ny fanendrena
Manangana fanendrena ho an'ny orinasanao amin'ny dingana tsotra 3:
Set - Ampidiro ny serivisinao sy ny ora fiasana. Manampia buffer, manakana ny fotoana hamerenanao ny fandaharam-potoanananao.
Share - Zarao amin'ny mpanjifanao URL ny pejy famandrihana. Ampio amin'ny tranokalanao, Google My Business, Instagram, Facebook, ary fantsona hafa.
Ekeo - Ekeo ny famandrihana avy amin'ny mpanjifa 24 × 7. Avelao ny mpanjifa handahatra fotoana, hamerina, ary hanafoana amin'ny fotoana mety.
Appointy dia iray amin'ireo mpitarika indostria amin'ny sehatry ny fandaharam-potoana fanendrena. Miaraka amin'ny maodelim-bidy freemium, manohana ny orinasa amin'ny habe rehetra izy. Izy io koa dia mamolavola rindrambaiko fandaharam-potoana fanendrena namboarina ho an'ny orinasa / orinasa lehibe hanomezana fahafaham-po ny marika manokana sy ny filany fandaharana manokana.
Vonona hampitombo ny orinasanao amin'ny Appointy?
Atombohy anio ny fitsapana voatondro ho 14 andro anao!
Tags: fanendrenamifidykalandriefandaharam-potoana amin'ny fanendrena an-tseraserampandrindra an-tseraseraZoomfanendrena zoom